ILBC - SUMMER 2018 - ILBC | IGCSE & A LEVEL SCHOOL
ILBC – SUMMER 2018
March 19, 2018 @ 8:00 am – 8:00 am
🔎 Discover Summer!
🏫 Discover ILBC!
ILBC Summer English Course 2018!
ILBC နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ၂၀၁၈!
ကျောင်းသားမိဘများ မျှော်လင့် စောင့်စားနေသော ILBC နွေရာသီသင်တန်းများ လာပါပြီ။
ILBC မှ ၂၀၁၈ နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများအား လာမည့် မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်မည်
ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယခုအချိန်မှစတင်၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါသည်။
ILBC နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို တနလာင်္နေ့မှသောကြောနေ့အထိဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဤသင်တန်းကို စိတ်ဝင်စား၍တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သင်တန်းချိန်ကို ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
🕗>>> နံနက်သင်တန်းချိန် – (၈) နာရီ မှ (၁၁) နာရီအထိ၊ 🕚
🕛>>> နေ့လည်သင်တန်းချိန်- (၁၂) နာရီမှ (၃)နာရီအထိ ဖြစ်ပါသည်။ 🕒
နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့်အကျိုးရလာဒ်များမှာသင်တန်းတက်ရောက်စဉ်ကာလအတွင်း အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို ဆရာ၊ဆရာမများ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်လေ့လာခြင်းသာမကဘဲ အင်တာနက်အသုံးပြု၍ အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည်တိုးတက် လာစေရန်လေ့လာခြင်း၊သီချင်းများသီဆိုခြင်းမှတဆင့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းတို့အပြင်စိတ်ဓာတ်နှင့်ကိုယ်ကာယဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းတို့လည်းပါဝင်ပါသည်။
ထို့ပြင်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည်ကျောင်းစာကြည့်တိုက်သို့သွားရောက်၍လည်းအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ကြားမှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အသက်အရွယ်နှင့်ဆီလျော်သော ရုပ်ရှင်ပရောဂျက်များမှတဆင့် အင်္ဂလိပ်စာနားလည်မှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း အခါအခွင့်သင့်သလိုပြုလုပ်ပေးပါသည်။
ထိုမျှသာမကဘဲ သင်္ကြန်ပွဲ၊ နွေရာသီကျောင်းကပွဲနှင့် လေ့လာရေးခရီးစဉ်များကိုလည်း ကလေးငယ်များ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲခြင်းဖြင့် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအသစ်များပေါင်းဖွဲ့၍ ပျော်ရွှင်စွာအတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သောအခွင့်အရေးများကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ILBC တွင်နွေရာသီကာလအတွင်း ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများပျော်ရွှင်စွာ
အင်္ဂလိပ်စာလာရောက်လေ့လာဆည်းပူးခြင်းသည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည်ကိုတစ်ဆင့်ခြင်း တိုးမြှင့်နိုင်ရုံသာမက မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မူကိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနှင့်အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများရရှိခြင်းစသည့် အကျိုးရလာဒ်များကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွင် တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများမှာ
📚- ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များကို မေတ္တာလက်ဆောင်ရရှိနိုင်ခြင်း၊
😎- စာသင်ခန်းငယ်များတွင် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် လေအေးပေးစက်များ တတ်ဆင်ထားသည့်အတွက် သက်သောင့်သက်သာ စာပေများကိုလေ့လာဆည်းပူးနိုင်ခြင်း၊
🚌-သင့်တင့်သောကျောင်းကားခဖြင့် ကျောင်းကြို/ပို့ အစီစဉ်ရှိခြင်း
📜-သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မူကို အကဲဖြတ်နိုင်စေရန်သင်တန်းတတ်ရောက်ချိန်ကာလ ၃လအတွင်း အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ၂ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများတွင် English four language skills တိုးတက်မှု၊ Grammar မှန်ကန်မှု နှင့် Vocabulary မှန်ကန်မှုများကို စစ်ဆေးပါသည်။ ထို့အပြင် Listening skills နှင့် Speaking skills ကို သင်တန်းကာလအတွင်း အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသည် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မူကို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် English စာဘာသာရပ်ကို Beginner မှစတင်ကာ Advanced Level ထိတတ်ရောက်နိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအသစ်များအနေဖြင့်လည်း မိမိနှင့်သင့်လျော်သည့် Level သို့တတ်ရောက်နိုင်စေရန် Placement Tests ကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းများအားလုံးအတွက် အသက် ငါးနှစ်အရွယ်မှစ၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါသည်။
ILBC မှ ၂၀၁၈ နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများအား လာမည့် မတ်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယခုအချိန်မှစတင်၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် စုံးစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
📱: ၀၁-၅၄၂၉၈၂ , ၅၄၅၇၂၀ , ၅၄၅၇၃၆ , ၄၀၀၁၅၆
🏫 :ILBC IGCSE & A LEVEL SCHOOL
လိပ်စာ၊ အမှတ် ၃၄ ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း, တာမွေ မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန် မြို့၊
📧: info@Ilbcedu.com , recdept@ilbcedu.com
📠 : +95(1)541040
« ILBC – Preschool Annual Concert
39th Preschool Graduation Ceremony »